5 Sababood Oo Gabdhaha Badankood Ay U Nacaan Ragga Qaar - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»5 Sababood Oo Gabdhaha Badankood Ay U Nacaan Ragga Qaar
Aayaha editor Send an email November 24, 2020
Waxaa laga yaabaa inaad aragtay ama aad la kulantay xaalad ah gabar rabitaan badan u muujisay nin bilawgii xiriirka ay si lama filaan ah u bilaawdo inay si xun u dhaqanto.
Waxyaabo badan ayaa keena in gabadha ay si lama filaan ah u bilaawdo inay si xun u dhaqanto ama ay ku nacdo iyadoo intabadan ay sababaan waxyaabo ay ragga qaar sameeyaan.
Waa kuwaan 5 arrimood oo gabdhaha badankood ka dhiga kuwa naca ragga.
Ragga badankood ayaa sameeya qaladkaan. Tani waa sababta gabdhaha qaar aysan u jeclayn inay booqdaan ragga, maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin in booqashada nin ay ka dhalan karto galmo, taas oo ah arrin aad u xun.
Dabeecadani waxay sidoo kale keeni kartaa in ninka uu boos xun ka galo gabadha maskaxdeeda.
Waxay ku fikiri doontaa in waxa ninku doonayo oo dhan ay tahay inuu la seexdo ama uu ka dan gaaro ka dibna uu tuuro; taas oo iyaduna keeneysa inay gabadhu ay nacdo ninka.
2. U Muujinta Rabitaan Qof Kasta
Waxaa jira ragga qaar oo saaxiib la ah gabar kasta. Daqiiqad kasta waa inaad aragtaa iyagoo lajooga haween ama la sheekeysanaya.
Dumarka badankood way neceb yihiin dabeecadan. Waa inaad fahamtaa in dumarka qaar uu galo masayr xad dhaaf ah markasta oo ay arkaan wiil ay xiriir la leeyihiin oo la jooga haween kale.
Uma adkeysan karaan markay arkaan raggooda oo la socdaan dumar badan, tanina waxay keeneysa inay si dhaqsi ah u nacaan ninka.
3. Kalsooni Yari
Kalsoonidu waa mid ka mid ah astaamaha dumarka badankood ay ka eegaan ragga. Dumarka guud ahaan waxay jecel yihiin ragga garanaya waxa ay doonayaan islamarkaana ay u socdaan.
Waxay aaminsan yihiin in ragga kalsoonida qaba ay si fudud guul ku gaari karaan. Dhinaca kale, waxay neceb yihiin ragga kalsoonida yar. Wiilasha aanan kalsoonida isku qabin oo kuwa kale ku canaantaan qaladaadkooda. Waxay sidoo kale aaminsan yihiin in ragga kalsoonida yar ay si fudud u eedeyn karaan markasta oo ay wax ka xumaadaan xiriirkooda.
4. Si Xun Ula Dhaqmid
Dabcan, qofna ma doonayo in si xun loola dhaqmo. Xitaa dadka sida xun ula dhaqma dadka kale ma doonayaan in loola dhaqmo sida oo kale. Marka maxaad ugu maleyneysaa inay gabadhu rabto inay ku kasbato ama ay ku jeclaato markaad ku xadgudubto shucuurteeda.
Haddii aad rabto inay gabadhu ku jeclaato oo aysan meel kale eegin, markaa si wanaagsan ula dhaqan sida qof kasta oo wanaagsan oo aadanaha u dhaqmi lahaa.
5. U dhaqmida ilmo oo kale iyo dagaal badan
Waxaa jiraan ragga qaar oo rag waaweyn ah laakiin wali u dhaqma si ciyaalnimo ah. Ma yaqaaniin goorta ay weydiiyaan su’aalaha qaarkood ama ay qaataan go’aannada ama ficillada qaarkood.
Waxay had iyo jeer oggolaadaan inay caradu ka tan badiso taasoo sababta inay ku dhaqaaqaan tallaabooyin aanan wanaagsaneyn.
Dumarka badankood way neceb yihiin ragga sidan oo kale ah. Nin aan xakameyn karin caradiisa waa kan dumarka badankood ay ka fogaadaan sababtoo ah ninka noocaas ah wuxuu ku waxyeeleyn karaa haweenkiisa wax yar oo xanaaq ah.
Sababaha Macquulka Ah Ee Ninku Ula Joogi Karo Haweeney Uusan Jecleyn